Vaovao Tsy Marina Fifehezan’ny ISIS Ny Toeran’ny Star Wars Nahatezitra Ny Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Tsy Marina Fifehezan'ny ISIS Ny Toeran'ny Star Wars Nahatezitra Ny Toniziana
Voadika ny 11 Avrily 2015 3:03 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Ελληνικά, Español, English
Tsy misy ahitana hirika ISIS tamin'ny fetiben'ny mozika elektronika andiany faharoa notontosaina tamin'ny Febroary lasa teo tao ammin'ny toerana nanatontosana ny horonantsary “Star Wars (Adin'ny Kintana) tao Nefta, Tonizia. Sary avy amin'ny pejy Facebookn'ny fetibe
Nozimbazimbain'ny Toniziana ireo tatitra dison'ny haino aman-jery milaza fa nofehezin'ireo extremista maherisetran'ny vondrona ISIS ny toerana nanatontosana ny Star Wars tao Atsimon'i Tonizia.
Tamin'ny 24 mars ny CNN namoaka lahatsoratra momba ny tanàna atsimon'i Tataouine, izay nanome ny anarany ho an'ny planeta noforonina, Tatooine tamin'ny horonantsary, lazaina ho “tobim-pandalovan'ny jihadista’. Nandray izany lahatsoratra izany ireo haino aman-jery goavana tahaka ny Huffington Post, ny Washington Post ary ny Guardian.
Lohatenim-baovao vitsivitsy milaza ny ISIS mifehy an'i Tatooine araka ny hita ao amin'ny Google News
Inona ary no zava-diso nataon'ireto haino aman-jery iraisampirenena sy lazaina fa matihanina ireto?
Nampiasa ny tatitra fisamborana ireo telo lahy avy any Tataouine Izay niezaka niampita an'i Libya mba hanatevin-daharana ny vondrona mpikomy, sy ny fahitana ireo fanafenam-pitaovam-piadiana sy bala ao amin'ny faritra’ (tsy nametraka izay tena misy ny toerana) ho porofon'ny fitantaran'izy ireo ny CNN.
Na izany aza, ny toeram-panafenam-pitaovam-piadiana izay nolazain'ny CNN dia hita tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa tao Ben Guerdane, tanàna ao amin'ny sisintany Libyana ao amin'ny governoràn'ny Medenine, lalana adiny roa eo ho eo miala ao Tataouine.
Nanazava izany tamin'i Ben Beaumont-Thom, tonian-dahatsoratra lefitra ao amin'ny Guardian i Nazanine Moshiri avy ao Al Jazeera teny anglisy :
Tanàna tena izy i Tataouine. Tsy eto no misy ny toeran'ny Star Wars. Tsy misy ny porofo fa nampiasaina ho tobin'ny ISIS ny tanànan'i Tataouine.
Tsy manana toby ao Tonizia ny ISIS. Marina fa hita tao Ben Gardane akaikin'ny sisintany ireo fitaovam-piadiana. Fa tsy tao akaikin'i Tataouine na ny toeran'ny Star Wars izany
Tsy misy ihany koa ny fifandraisana eo amin'ireo fitaovam-piadiana hita tao Ben Gardane sy ny ISIS.
Fanampin'izany, ny hoe maha-tovolahy mankao Libya sy Syria azy ireo fotsiny mba hanatevin-daharana ny vondrona mpioko dia tsy midika fa tobin'ny ISIS na vondrona mpioko hafa ny tanàndehibe na tanàna kely niavian'izy ireo. Saingy satria niseho tao Tatooine (ny tiako lazaina hoe Tataouine) izany, manaitra loatra ny tantara (raha misy na dia iray aza) ka sarotra hoan'ny haino aman-jery sy ny mpanao gazety ny tsy hijery ireo pejy efa nisy an'arivony nijery.
Farany, tsy ao an-tanànan'i Tataouine no misy ny toerana nandefasana ny sarimihetsika Star Wars, na dia nomena ny anarany aza ny planeta Tatooine noforonina. Ao an-tanànan'i Nefta, ao amin'ny governoràn'i Tozeur, lalana dimy ora miala ao Tataouine no misy ny toerana.
Google Maps mampiseho ny fahalavirana eo amin'i Tataouine sy ny toerana Mos Espa ao amin'ny planeta noforonina Tatooine
Tao amin'ny Medium.com, nandiso ny lahatsoratry ny CNN ny AJ+:
Hoan'ny mpanoratra gazety, tantara mahaliana izany. Planeta ngazana ao amin'ny vahandanitra lavitra, tena lavitra ankehitriny no fialokalofan'ireo mpiady izay niampita nankany amin'ny lafiny maizin'ny Hery. Indrisy (farafaharatsiny amin'ity tantara ity), raha ny marina tsy notontosaina tao Tataouine ny sarimihetsika Star Wars, na dia nomena ny anaran'ny tanàna aza ny planeta noforonina Tatooine. Ksar Ouled Soltane no toerana tena akaiky nanaovana ny sarimihetsika, iray amin'ireo toerana nampiasaina ho faritry ny andevo izay nonenan'i Anakin Skywalker sy ny reniny nandritra ny Star Wars Fizarana voalohany : The Phantom Menace (Ny Fandrahonan'ny Matoatoa).
Tao amin'ny Twitter, namaly am-panesoana ireo mpiserasera.
Yamina Thabet, filohan'ny Fikambanana Manohana ny Vitsy An'isa ao Tonizia nisioka hoe:
Tsy maintsy tafiana ny Niqab
Hedi nisioka hoe:
Ity ny Emiran'i Tataouine, be volombava araka ny hitanareo
Eo ampanapahana ny lohan'ny R2D2 ny C-3PO
MAIKA: Nampiasa vola an-tapitrasany miliara tamina fitaovam-piadiana vaovao hiadiana amin'ny ISIS i Tonizia.
Mpanoratra gazety monina ao Tunis, Frédéric Gedhof nisioka ny itovian'ny zava-misy ao amin'ny toeran'ny Star Wars ao Nefta
Mampari-koditra izany fihaonan'ny djihadista isan-taona ao Tonizia izany.
Raha ny marina, navadika ho toera-pandihizan'ny mpizahatany sy ny tanora Toniziana manatrika ny fetiben'ny mozika elektronika Les Dunes Electroniques ny toeran'ny Star Wars ao Nefta tamin'ny volana lasa teo.
Tanora mifety ao amin'ny toeran'ny Star Wars ao Atsimon'i Tonisia. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'ny Electronic Dunes Festival
Toeram-pizahantany manintona sy malaza ireo toerana nanaovana ny horonantsary Star Wars. Satria mandalo fotoan-tsarotra ny fizahantany, kitro ifaharan'ny toekaren'i Tonizia, herinandro taorian'ny fanafihana nahafatesana olona tao amin'ny Mozean'i Bardo, dia nahatezitra ilay Toniziana Wafa Ben Hassine ny tantaran'ny Star Wars, ka nisioka ho an'i Ishaan Tharoor ao amin'ny Washington Post izy:
Tsy marina mampidi-doza ity lahatsoratra ity. Milaza fa misy fitaovam-piadiana ao amin'ny toerana nanaovana ny horonantsary. Izay diso. Manohintohina ny fizahan-tany izany lahatsoratra izany.
Fantatrao ve ny fiantraikan'ny lahatsoratrao eo amin'ny fiveloman'ny firenena?
Taorian'ny fahatezerana tao amin'ny media sosialy, nandefa fanitsiana ny Guardian sy ny Huffington Post. Saingy efa tara loatra. Mampiseho ny fiitatry ny fanimbana efa nihatra ny fitadiavana amin'ny teny Anglisy ny hoe ‘ISIS Star Wars set’ (toeran'ny ISIS Star Wars) tao amin'ny Google News.